LEGỌS :EJIMA NWOKE ABỤỌ ALỤWO EJIMA NWANYỊ ABỤỌ – hoo!haa!!
LEGỌS :EJIMA NWOKE ABỤỌ ALỤWO EJIMA NWANYỊ ABỤỌ
Legọs – Na Satọdee, abalị iri n’otu nke ọnwa Jenụwarị, afọ 2020 ejima nwoke abụọ yiri onwe ha, Tayelolu Joshua na Kehinde Caleb mejupụtara ihe na-agụ ha agụụ kemgbe site na agbamakwụkwọ ha na ejima ụmụ agbọghọ abụọ yiri onwe ha, Taiwo Eunice and Kehinde Bernice Elejofi.
Ụlọ ụka ndị Redeemed Christian Church of God, ebe a nọrọ mee agbamakwụkwọ ahụ na Legọs jụrụ n’ọnụ kpam kpam.
Kehinde lụrụ Kehinde ebe Tayelolu lụrụ Tayelolu.
Ọzọkwa, Elijah na Enoch Olatunji, ndị enyemaka nwoke na-agba akwụkwọ (grooms’ men) bụkwu ejima yiri onwe ha.
Ndị ejima, ndị nke nwoke bụ ndị Modakeke, Osun Steeti, na-emekọ ihe nile ọnụ. Ha gụkọrọ akwụkwọ ọnụ site na Praịmarị ruo mahadum, ebe ha abụọ gụkwara na ngalaba agụmakwụkwọ Mmegha Ahụ n’ahụike (Physical & Health Education) na mahadum Obafemi Awolowo, Ile-Ife, ebe ha abụọ ji nzere mmụta ogo nke mbụ (First Class) were pụta n’afọ 2014.
Previous Post: DANGOTE AKPỌLITEWO ANAMMCO N’ỌNWỤ
Next Post: IHEDIOHA: PDP KA GA – EME NGAGHARỊ IWE ECHI N’ABỤJA